१६ असार, काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेकपाभित्र स्पष्ट वक्ता मानिन्छन् । यद्यपि उनी अहिलेको ध्रुवीकरणमा माधव नेपाल पक्षमा छन् ।
यो बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउँछ त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा पाण्डेको भनाइ छ, ‘पार्टीले केपी ओलीलाई मात्रै हटाउँछ भन्ने होइन । केपी ओली र प्रचण्ड दुवैलाई हटाउन सक्छ । हामी सबैको भविश्य तलमाथि हुन्छ भने त त्यो दिन आउँदैन ? यो पार्टी केपी ओली र प्रचण्डको लिमिटेड कम्पनी र हामी त्यसका शेयर होल्डर होइनौं ।’
प्रस्तुत छ अनलाइनखबरका मात्रिका पौडेलले नेकपा नेता पाण्डेसँग गरेको कुराकानी–
ओलीलाई पूर्व माओवादी नेताको सन्देश : हामी पक्षमा थिएनौं, भ्रममा नपर्नुस् साथ दिन सक्दैनौँं
ओलीलाई पूर्व माओवादी नेताको सन्देश : हामी पक्षमा थिएनौं,भ्रममा नपर्नुस् साथ दिन सक्दैनौ
बीजमांडू 25 दिन पहिले
ओली-प्रचण्ड भेट : स्थायी कमिटी बैठकको विषयमा छलफल
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावबारे नेकपाका अध्यक्षद्वय कपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र प्रचण्डबीच बुधवार बालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा छलफल भएको हो। छलफल भर्खरै सकिएको छ। छलफलमा स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुने एजेण्डा तय गरिएको प्रचण्डका प्रेस
१७ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ३१ स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा भेला भएका छन् । र, ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद छाड्नुपर्ने वरिष्ठ …
ओलीलाई प्रचण्डले भने ‘अब तपाईं प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुस्’ प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको मुद्दाले प्रवेश
स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको अभिव्यक्तिमाथि उठ्यो प्रश्न,'कसले सरकारबाट हटाउन खोज्यो प्रमाण पेश गरियोस्'
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी, अध्यक्ष ओली पनि सहभागी
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्दैछन्। आजको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवंम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित भएका छन्। हिजोको बैठकमा उनी सहभागी नहुँदा आलोचना भएको थियो। नेकपाल...